Mareykanka oo sheegay inuu Kordhinayo Duqeymaha uu ka Geysanayo dalal ay ku jirto Somalia |
Mareykanka oo sheegay inuu Kordhinayo Duqeymaha uu ka Geysanayo dalal ay ku jirto Somalia
buy Cialis Black online cheap, buy lioresal online. Xukuumadda Mareykanka ayaa sheegtay inay kor-dhinayso duqeyaha cirka ah ee uu ka wado dalal ay ku jirto Soomaaliya, kuwaasoo ay ku bar-tilmaameedsanayso Saraakiisha Sar-sare ee Xarakada Al-shabaab.
Diyaaradaha Drones-ka Mareykanka ayaa Sanbadihii u dambeeyay Weerarro ka Geysanayay deegaanno ku yaalla Koonfurta Somalia, iyagoo beegsanayay qaar ka mid ah saraakiisha sare ee Al-shabaab.
War dhowaan ka soo baxay Mareykanka ayaa lagu sheegay in weerarada diyaaradaha Drones ay ka fuliyaan dalal badan oo ka mid ah Soomaaliya la kordhinayo.
Mareykanka ayaa dhawaan shaaciyay inay kordhinayso duqeymaha waddamo ay ku jirto Soomaaliya, ayna ka mid yihiin, Yemen, Afgaanistaan, Liibiya, Bakistaan iyo kuwo kale oo ay ka howlgalaan xoogagga Islaamiyiinta ah.
Haddaba, wasiirkii hore ee Gaashaandhiga Somalia, C/xakiin X. Maxamuud Fiqi oo ha ladyay VOA ayaa sheegay in weerarrada diyaaradaha Drones-ka ay horay u suuro-geliyeen in la beegsado saraakiil muhiim ah oo ka tirsan Al-shabaab.
Fiqi ayaa sheegay inay aad u yar yihiin khasaaraha rayidka kasoo gaara inta ay socdaan duqeymaha diyaaradaha aan duuliyaha lahay; balse gantaallahoodu ay inta badan ku dhacaan goobaha loogu talo-galay oo keliya.
“Shaki kuma jiro in duqeymahan ay khasaare xooggan gaarsiinayaan saraakiisha Al-shabaab iyo habka ay u howlgaleen, guulaha laga gaaray waxaa ka mid ah in la beegsaday hogaamiyeyaal muhiim ahaa sida Axmed Godane oo sanadkii lasoo dhaafay lagu dilay duqeyn diyaaradeed,” ayuu yiri Fiqi.
Dhanka kale, mar la weydiiyay inuu jiro xiriir ka dhaxeeya sirdoonka Mareykanka iyo kuwa Somalia marka hawlgallo noocan ah ay dhacayaan, ayuu ku jawaabay in ay jirto wada-shaqeyn aad u xoogan oo ku aaddan wadaagidda xogaha iyo in ay ka wada-tashadaan marka hawlgal la sameynayo.
Ugu dambeyn, Xukuumadda Mareykanka ayaa duqeymaha cirka ah ee ay u isticmaasho diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ka fulisay waddamada Yemen, Somalia, Bakistaan, Afgaanistaan iyo Liibiya, iyadoo ku beegsata madaxda Kooxaha dalalakaas ka dagaalama.